azụmahịa na ego | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: azụmahịa na ego
Howitzer "Hyacinth". Egbe "Hyacinth-B": nkọwapụta na foto
Gburugburu 50-60 nke narị afọ gara aga, mmepe nke agba agba agba agba ọdịnala na USSR fọrọ nke nta ka ọ kwụsị. Mgbe ahụ, na nkuzi agha, echiche a na-ekwukarị bụ na ọdịnihu dị na mgbagha. N'ụdị ọnọdụ ahụ, ndị mmepe ...
Etu esi emepe ahia ahia. Ngwá ọrụ dị mkpa maka azụmaahịa
Kwụ ụgwọ - sitere na Bekee. "Vending", nke putara "ire ahia nke ire na oru di iche iche site na igwe ndi ire." E nyere akwụkwọ nkọwa akụ na ụba. Machineszụta akụrụngwa maka azụmaahịa enwere ike ...
Njikwa onwe onye bụ ... cipleskpụrụ, echiche, ọrụ, ụzọ nke ijikwa onwe ya. Njikwa onwe gị
Njikwa onwe gị bụ otu n’ime ihe dị mkpa iji nweta ihe ịga nke ọma. N’ị mụta ka esi ekenye oge gị nke ọma, ị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma karịa ka ị nweta ihe ị chọrọ. Nkowa nke njikwa onwe onye
Cornet bụ usoro mgbapu ogbunigwe. ATGM “Cornet-EM”. ATGM “Cornet-E”
Kemgbe Agha Firstwa Mbụ, tankị ghọrọ ezigbo isi ọwụwa maka ụmụaka. Na mbu, obuna mgbe enwere ha agha agha nke mbu, ha ahapuru ndi agha ha. Mana ọbụlagodi n'oge Agha Secondwa nke Abụọ,…
IP televishọn - Ọgbọ ọzọ dijitalụ Digital
IP-TV bụ ụzọ kachasị adaba na usoro ọhụụ iji lelee ihe ngosi TV. N’adịghị ka ụdị igwe onyonyo dijitalụ (eriri, satịlaịtị na ala), IP-TV bụ ọrụ mmekọrịta zuru oke. IP-TV bụ onye, ​​...
Inye ahia ahia. Andzọ na ụkpụrụ nke ịtụle azụmaahịa
Nnyocha nke nyocha uru ahịa na-emetụta ụfọdụ, kama ịrụsi ọrụ ike n'ọrụ, na-enyere onye nwe ya aka ikpebi uru ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Enwere ike ịchọ ya n'ọnọdụ dị iche iche. Tụle uru ahịa dị n'ahịa nwere ike ...
Gini bu napalm? Ojiji napalm
Ọtụtụ ndị Soviet mụtara banyere ihe napalm bụ naanị n'ime afọ isii, na-ele akụkọ telivishọn site na ịlụso Vietnam agha. Ọkụ ndị jọgburu onwe ha, ndị merụrụ ahụ ma nwatakịrị nwụrụ, obodo na obodo nta na-ere ọkụ mere ka ihe dị mma ...
Etu esi akwụ ụtụ ụgbọ njem site na "Ọrụ steeti"? Kwụ ụtụ n'ịntanetị, site na ụlọ akụ
Etu esi akwụ ụtụ ụgbọ njem site na "Ọrụ steeti"? N’eziokwu, okwu a na-amasị ọtụtụ ụmụ amaala ọhụụ. E kwuwerị, mmadụ anaghị achọ ịkwụ kwụ n'ahịrị n'ụlọ akụ ogologo oge iji kwụọ ụgwọ steeti. Mgbe ụfọdụ ...
Kedụ akwụkwọ ndị ị ga-enye iji gosipụta ihe ejiri ego echekwa
Ihe na 15.09.2019 13.12.2019
Mkpa ọ dị mkpa ịbanye n'ime ụlọ akụ nke enwetara, wee wepụta nnabata nke akụ sitere na iwu ụtụ isi. A ga-atụle usoro ikpeazụ nke isiokwu a. Okwesiri iburu n'uche na ka…
Ego ezumike nka - gini bu gini? Ọrụ ndị bụ isi na ụkpụrụ ọrụ
Ewoo, n'ụwa a na-anwụ anwụ, enwere ọtụtụ usoro nke ugbu a edobeghị n'okpuru mmadụ. Otu n’ime ha na-aka nká. Iji belata mmekpa ahụ, a chepụtara ọtụtụ ihe ...
Mgbapụta ego bụ akwụkwọ nchekwa edebanyere aha nke na-egbu dị ka akụkụ nke nkwekọrịta.
A na-eji ego mgbazinye ego dị ka ọnụnọ nke nkwekọrịta n'ụdị ala na ụlọ. Typedị azụmahịa a chọrọ nkwenye gọọmentị site na iji akwụkwọ pụrụ iche, n'ihi na mgbazinye ụlọ bụ ego mgbazinye ego buru ibu ...
Mbinye ego nke ndị ahịa bụ ... Ohere nke ọmụrụ nwa na Sberbank
Ihe na 15.09.2019 14.12.2019
Ịgbazinye ego abanyela ndụ nke ndị obodo anyị dịka ohere ịnweta ngwa ngwa maka mkpa ụfọdụ. N'ihi ọrụ a, mmadụ ekwesịghị ịgbazite n'aka ndị enyi ma ọ bụ maka ọtụtụ ...
Etu esi atụgharị obere akpa Qiwi site na ọnụ ọnụ: ụzọ ole na ole dị mfe
Ihe na 15.09.2019 30.09.2019
Ọ dị mfe iji sistemụ ịkwụ ụgwọ a rụọ ọrụ karịa ka ndị ọzọ. Dabere na akaụntụ gị, wepụ ego, kwụọ ụgwọ ntanetị maka ngwongwo ma ọ bụ ọrụ, fines ma ọ bụ mgbazinye ego site na iji obere akpa elektrọnikị QIWI…
Kotler Philip (Philip Kotler): ahia, njikwa
Ihe na 15.09.2019 16.12.2019
Aha nna a na aha - Kotler Philippe - ma gwa ndi ọha. Nke a abụghị onye na - eme ihe nkiri a ma ama, ọ bụghị onye na - ekiri TV, nkọwa nke ndụ onwe ya nke asịrị ọ bụla n'ọnụ ụzọ mara. Kotler ...
Usoro omume ndị ahịa: mgbaru ọsọ na usoro ọzụzụ
You nụla banyere nzukọ ọmụmụ ihe na nkuzi, isiokwu nke bụ usoro ebumnuche ndị ahịa maka azụmaahịa? Ka anyị hụ ihe ụdị ọrụ ahụ bara na uru ha nwere ike ịbara gị ma ọ bụ ...
Storelọ ahịa vidiyo-shoper.ru: ndị ahịa na ndị ọrụ nyocha
Kedu ihe ga-atọ gị ụtọ karịa ịzụta ngwaọrụ ọhụrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na "ihe ọhụrụ" ahụ dị ka ịchọrọ, na ọnụahịa dị ọnụ ala ma na-enyefe ya site na ndị ọsụmụmụ ọnụ ọchị na-ebuga n'ụlọ gị? Mana ahịa ahụ enweelarị ...
Nduku Sante: nkọwa dị iche iche
Isi ihe di n’ime akuku ubi ahihia na elu di elu abughi na nmeghe aka na ihe ndi mmadu gha n’iru, kamakwa nhọrọ di nma. N'ihe banyere uto na njiri mara ngwaahịa, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ọ na-emeri ọfụma ...
"Bọọlụ" - siste mpụị mgbọ n'ụsọ osimiri
Ọrụ dị n'ịhụ maka nchekwa nke oke mmiri bụ ihe dị mkpa maka steeti ọ bụla nwere ogologo akụkụ ụsọ mmiri. Mba ọ bụla na-agbaso iwu mba ofesi nwere ike ịtụ ụjọ mwakpo nke ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike taa. Maka ndị Russia,…
Isi nke ahia
Onye ọ bụla na-ere ahịa na-achọ ịbawanye ahịa ha. Usoro a bụ ezigbo nka, ihe ọmụma banyere iwu dị ala nke ga-edurịrị ihe ịga nke ọma. Isi nke azụmaahịa, nke bụ otu maka azụmahịa nke nnukwu ...
Casino "Fero": nyocha na nkọwa nke ndị egwuregwu. O kwere omume iti cha cha “Fero”?
Online 'cha cha' 'Fero' bụ ntụrụndụ na ezumike. Maka ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa, egwuregwu cha cha n'ịntanetị aghọwo ụdị ntụrụndụ kachasị ewu ewu. Online cha cha "Fero" "Fero" na-enye ndị ọbịa ya ọnọdụ kacha mma…